Akhriso Guddoomiyihii Ahlu suna ee Dhuusamareeb oo ciidanka dowlada ay kaxaysten mxy tahay sababta? - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Akhriso Guddoomiyihii Ahlu suna ee Dhuusamareeb oo ciidanka dowlada ay kaxaysten mxy...
Akhriso Guddoomiyihii Ahlu suna ee Dhuusamareeb oo ciidanka dowlada ay kaxaysten mxy tahay sababta?
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa la sheegay inay xalay xireen Guddoomiyihii hore ee degmada Dhuusamareeb ugu Magacaawnaa hoggaanka Ahlusunna,kaas oo lagu Magacaab Axmed Walad Cabdalla.
Xilliga la xirayay ayaa wararka la helayo waxaa ay sheegayaan in isaga iyo Xubno kale ay kasoo baxeen Xerada Inji oo fariiisin weyn u ah hoggaanka Sare ee Ahlusunna ee ku biiray Maamulka Galmudug.
In kastoo aan sirasmi ah loo cadeyn sababta loo xirey Guddoomiyihii hore ee degmada Dhuusamareeb & Xubnaha la socdey ayaa hadana wararka la helayo waxaa ay sheegayaan in Madaxda Sare ee Galmudug Amar kasoo baxay lagu xadiday dhaq dhaqaaqa Galitaanka ama kasoo bixida ee Dhismaha Inji.
Hoggaanka Ahluusnna oo ka soo horjeeda Maamulka Galmudug ee Dowladu Aqoonsantahay ayaanan weli ka hadlin tallaabadaan lagu xiray xubno taageersan oo uu kamid yahay guddoomiyihi hore ee degmada Dhuusamareb,hayeeshee waxaa uu kusoo aadayaa illi weli uu jiro khilaafkii ka dhashay doorashadii ka dhacdey Magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleXog;-Dowlada fadaralka oo markii qoor qoor ay gaysay galmudug miisaniyadii galmudug la kordhiyay
Next articleFaah faahino ku saabsan ciidamo ka tirsan galmudug oo gadooday